IZIXHOBO EZI-5 ZEAMAZON TRACKER IZIXHOBO EZINGAMA-2021 - ITHAMBILE
Njengoko ndihlala ndisithi kuwo onke amanqaku am, ixesha lotshintsho lwedijithali lutshintshile ubuso bayo yonke into esiyenzayo kunye nendlela esenza ngayo. Ngoku asiyi nakwiivenkile ezingaxhunyiwe kwi-intanethi kakhulu, ukuthengwa kwe-intanethi ngoku yinto yexesha. Kwaye xa kuziwa kuthengiso lwe-Intanethi, iAmazon ngaphandle kwamathandabuzo lelinye lawona magama makhulu onokufumana kuwo ngoku.
Iwebhusayithi inezigidi zeemveliso abathengisi abavela kwihlabathi liphela badwelise eqongeni. Ukugcina ukhuphiswano luphila kunye nokwenza ukuba abathengi babe nomdla ngalo lonke ixesha, iwebhusayithi ihlala ihleli inyuka amaxabiso eemveliso ngokunjalo.
Kwelinye icala, le ndlela iqinisekisa ukuba abathengisi eAmazon bafumana eyona nzuzo iphambili. Kwelinye icala, nangona kunjalo, yenza imeko inzima kakhulu kubanini bamashishini abancinci kunye nabathengi abakhe bahlawula ixabiso eliphezulu lemveliso kodwa ngoku bafumanisa ukuba imveliso ngoku ithengiswa ngexabiso eliphantsi kakhulu.
Ukujongana nalo mbandela, ukuba usebenzisa iAmazon okanye nayiphi na enye indawo yokuthenga ngeintanethi- endiqinisekile ukuba uyayisebenzisa- kuya kufuneka ufake isitsheki sexabiso kwisikhangeli sewebhu sekhompyuter yakho.
Yintoni le tracker yexabiso iyenzayo kukugcina umkhondo wokuhla kwexabiso lemveliso kunye nokwazisa malunga nokwehla kwexabiso. Ukongeza kuloo nto, unokuhambisa inkqubo ngokuthelekisa amaxabiso emveliso enye kumaqonga awahlukeneyo. Kukho uninzi lwezi trackers zamaxabiso ezikhoyo ngaphandle kwi-intanethi.
Nangona ziindaba ezimnandi ezo, inokudideka ngaxeshanye. Ngobuninzi bezinto onokukhetha kuzo, ukhetha njani efanelekileyo ngokufanelekileyo kwiimfuno zakho? Nguwuphi kubo ofanele ukhethe? Ukuba ufuna iimpendulo zale mibuzo, nceda ungoyiki, sihlobo sam. Ufike kwindawo elungileyo. Ndilapha ukukunceda ngokuchanekileyo. Kule nqaku, ndiza kuthetha nawe malunga ne-5 yexabiso le-Amazon tracker izixhobo ze-2021 onokuzifumana apho kwi-intanethi njengangoku. Ndiza kukunika ulwazi oluthe kratya malunga nenye nganye yazo. Ngexesha ugqiba ukufunda eli nqaku, awuzukufuna kwazi nganto ngazo. Qiniseka ukuba unamathele kude kube sekupheleni. Ngoku, ngaphandle kokuchitha elinye ixesha, masingene nzulu emxholweni. Qhubeka ufunda.
2. Inkamela CamelIkamela
4. UPenny Parrot
5. Ukukhangelwa kweJungle
Apha ngezantsi kuchazwe izixhobo ezi-5 ezilungileyo zeAmazon Tracker izixhobo zika-2021 onokuzifumana phaya kwi-intanethi njengangoku. Funda kunye ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya malunga ngamnye wabo.
Kutheni i-netflixflix ingasebenzi kwikhompyuter yam
Okokuqala, isixhobo sokuqala samaxabiso eAmazon esiyi-2021 endizakuthetha nawe kuthiwa yiGcina. Sesinye sezixhobo ezithandwa kakhulu ngamaxabiso eAmazon onokuzifumana phaya kwi-intanethi njengangoku. Inqaku elikhethekileyo lesixhobo kukuba liza kulayishwa uluhlu olubanzi lweempawu ezintle phantsi koluhlu lwemveliso kwiAmazon.
Ukongeza kuloo nto, isixhobo sikwabonelela ngomsebenzisi ngegrafu yokusebenzisana eyenziwe ngobunzulu kunye nezinto ezahlukeneyo ezahlukeneyo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, ukuba ucinga ukuba itshathi ayinazo izinto ezithile, kunokwenzeka ukuba ungongeza inani lezinto eziguquguqukayo kuseto lokukhetha ngaphandle kobunzima okanye umzamo omkhulu kwicandelo lakho.
Kunye naleyo, abasebenzisi banokuthelekisa uluhlu kuwo onke amaxabiso amazwe eAmazon. Esi sixhobo siza nolayisho lweempawu ezinje ngokuseta i-Facebook, i-imeyile, iTelegram, nezinye ezininzi. Unokukhetha kwakhona isaziso sokuhla kwexabiso.
Ngaba ujonga iifestile ngoku? Ke konke okufuneka ukwenze kukutyelela nje icandelo 'leeNgxoxo'. Isixhobo se-tracker sexabiso sihlanganisa izigidi zoluhlu lweemveliso ezivela kwiAmazon kwaye siza nezona zivumelwano zibalaseleyo kwiindidi ezahlukeneyo onokukhetha kuzo.
Isixhobo se tracker esisebenza ngexabiso sisebenza ngokugqibeleleyo phantse kuzo zonke izinto ezithandwayo kunye nezona zithandwa kakhulu kwizikhangeli ezinje ngeGoogle Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Edge, nezinye ezininzi. Ukongeza kuloo nto, iindawo zentengiso zaseAmazon ziyahambelana nazo .com, .in, .au, .ca, .uk, .mx, .br, .jp, .it, .de, .fr, kunye .es.
Esinye esona sixhobo silungileyo samaxabiso eAmazon ka-2021 endizakuthetha nawe ngoku kuthiwa yiCamel CamelCamel. Ngaphandle kwegama elingaqhelekanga, isixhobo esilandelwa lixabiso ngokuqinisekileyo silifanele ixesha lakho kunye nokuqwalaselwa. Isixhobo senza umsebenzi omkhulu wokulandela amaxabiso ezinto ezikuluhlu lweemveliso zeAmazon. Ukongeza kuloo nto, ikwathumela olu luhlu ngqo kwibhokisi yakho yeposi. Isongezo sesikhangeli sibizwa ngokuba yiCamelizer. I-add-on iyahambelana phantse nazo zonke izinto ezithandwayo kunye nezona zithandwa kakhulu kwizikhangeli ezinje ngeGoogle Chrome, Mozilla Firefox, Safari, nezinye ezininzi.
Inkqubo yokusebenza kwesixhobo sokulandela ixabiso isifana naleyo kaGcina. Kule sixhobo, unokukhangela nayiphi na imveliso oyifunayo. Njengenye indlela, ungasebenzisa isongezelelo sesikhangeli ukujonga iigrafu zembali yamaxabiso oza kuzifumana kwiphepha lemveliso ngokwalo. Ukongeza koku, unokukhetha nesaziso se-Twitter kwimeko apho kukho ukwehla kwexabiso kwimveliso ojonge ixesha elide ngoku. Umsebenzi ubizwa ngokuba yiCamel Concierge Service.
Ezinye zezinye izinto ezimangalisayo zibandakanya isihluzo kudidi, ukukwazi ukukhangela iimveliso ngokungena kwi-URL yeAmazon ngokuthe ngqo kwindawo yokukhangela, indawo yeAmazon, ukuvumelanisa uluhlu lwezifiso, kunye nezinye ezininzi. Nangona kunjalo, akukho sihluzi sisekwe kwixabiso kunye noluhlu lwepesenti. Isixhobo setracker tracker sikwenza ukuba ubone awona aphezulu kunye namaxabiso asezantsi ngokwahlukeneyo kwiifonti ezibomvu neziluhlaza. Ngenxa yoko, unokwenza ngokulula ingqondo yakho malunga nokuba ucinga ukuba ixabiso langoku likulungele okanye akunjalo.
Kukho iindlela ezimfutshane zesixhobo esifumanekayo kuzo zombini i-Android kunye Iinkqubo zokusebenza ze-iOS . Isixhobo se-tracker sexabiso siyafumaneka kumazwe amaninzi aquka i-US, i-UK, i-Itali, iSpain, iJapan, i-China, iJamani, i-France, i-Canada kunye nezinye ezininzi.
Ukuphazamiseka kugxilwe ekujongeni uhlaziyo
Khuphela iCamel CamelCamel
Ndicela ngoku nonke ukuba nitshintshe ugxininiso lwenu lubhekise kwesona sixhobo sisezantsi seAmazon sex tracker ye2021 onokuyifumana phaya kwi-intanethi njengangoku. Isixhobo sokulandela ixabiso sibizwa ngokuba yi-PriceDrop, kwaye siwenza kakuhle umsebenzi waso.
Ulwandiso lusebenza kakuhle kakhulu phantse kuzo zonke iibrawuza ezinjengeGoogle Chrome, iMozilla Firefox, nezinye ezininzi. Uya kufumana izaziso kwiimveliso ezithile ezivela kwiAmazon. Ukongeza kuloo nto, unokugcina iso lihla ngamaxabiso exesha elizayo. Oku, nayo, iqinisekisa ukuba wonga kangangoko xa uthenga. Esi sixhobo sesinye sezona mzuzwana zisemgangathweni ama-tracker amaxabiso eAmazon akwalumkisa ngotshintsho lwamaxabiso rhoqo kwiiyure ezili-18.
Funda kwakhona: Ungasisebenzisa njani isixhobo seDirectX Diagnostic in Windows 10
Konke okufuneka ukwenze ukuze uyisebenzise ukufaka ulwandiso kwisikhangeli sakho. Nje ukuba yenziwe, ungaya ngokulula kwiphepha elithile lemveliso ongathanda ukujonga ixabiso kwiwebhusayithi yeAmazon. Emva koko, kunokwenzeka ukuba uqale ukulandelela ixabiso lemveliso ekhankanyiweyo. Ngokukhawuleza ukuba kukho ukuhla kwexabiso, isixhobo se-tracker sexabiso siza kuthumela isaziso kwisiphequluli osisebenzisayo. Ukongeza kuloo nto, isixhobo esilandelwa lixabiso sikwenza ukuba ukwazi ukugcina iliso lisehla kumaxabiso exesha elizayo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, ngoncedo lwesi sixhobo, kunokwenzeka ukuba uphonononge uluhlu lweemveliso ozilandelayo nangaliphi na ixesha ngokungena kwimenyu yokuhla kwexabiso. Oku, ngaphandle kwamathandabuzo, kuluncedo olukhulu kubasebenzisi abaninzi - ukuba ayingabo bonke.
Ngoku, esona sixhobo silandelayo sexabiso seAmazon esiza kuthetha nawe sibizwa ngokuba nguPenny Parrot. Isixhobo sokulandela amaxabiso siza silayishwe ngeyona nto iphambili kwelona xabiso liphantsi itshathi yazo zonke iimbali zamaxabiso eAmazon alapha kwi-intanethi njengangoku.
Isixhobo setracker tracker asixinaniswanga, silungelelanisiwe, sicocekile, kwaye sinendawo yokugcina amanani asezantsi eempawu kodwa zezona zibaluleke kakhulu. Ujongano lomsebenzisi (UI) luncinci, lucocekile kwaye kulula kakhulu ukulusebenzisa. Nabani na onolwazi oluncinci lobuchwephesha okanye nabani na oqala ukusebenzisa esi sixhobo unokuyiphatha ngaphandle kobunzima okanye umzamo omkhulu kubo. Ngokuqinisekileyo oku kuluncedo olukhulu kubo bonke abasebenzisi. Iimpawu zidweliswe ngendlela ebonakalayo kunye nesibindi. Kukho indlela emfutshane yabasebenzisi be-iPhone apho banokubona ngokulula imbali yamaxabiso emveliso ethile kwiAmazon.
Kwicala lezithintelo, isixhobo setracker tracker sihambelana kuphela newebhusayithi yenkampani yase-USA, eyiAmazon.com. Ukongeza kuloo nto, kuya kufuneka ungene ukuze usebenzise isixhobo samahala samaxabiso eAmazon.
Isixhobo se-tracker sexabiso sixhasa phantse zonke izandiso zesikhangeli ezinje ngeGoogle Chrome, i-Intanethi ye-Intanethi, iOpera, iMozilla Firefox, nezinye ezininzi. Nangona kunjalo, iyahambelana neAmazon.com kuphela iwebhusayithi ye-USA yenkampani.
Khuphela uPenny Parrot
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, esona sixhobo sokugqibela samaxabiso asezantsi eAmazon endizakuthetha nawe kuthiwa yiJungle Search. Igama lilungile xa kuthathelwa ingqalelo ihlathi elikhulu leemveliso ezikhoyo kwiAmazon. Inkqubo yokusebenza kwesixhobo sokulandela amaxabiso ilula, apho ungaya khona eAmazon ngokubetha iqhosha lokungena.
Funda kwakhona: Isoftware eyi-10 yeAntivirus yasimahla yeAroid
Ngoncedo lwesi sixhobo sexabiso somkhondo, ungakhangela nayiphi na imveliso oyifunayo ngokwendidi yayo kunye nokusebenzisa indlela elula yokukhangela. Konke okufuneka ukwenze ukusebenzisa indlela yokukhangela kukufaka igama lemveliso, ubuncinci kunye nexabiso eliphezulu, igama lenkampani evelisa imveliso, uphononongo lwabathengi, kunye nobuncinci kunye nepesenti ephezulu.
Nje ukuba uhambisane nokhangelo, iwebhusayithi yeAmazon iya kuvula entsha kunye netab eyahlukileyo apho iimveliso ziya kuboniswa ngokwemiqathango yokukhangela oyinike yona. Akukho sikhangeli songeziweyo sifumanekayo kwesi sixhobo samaxabiso eAmazon ngokunjalo.
Khuphela ukuKhangela kweJungle
Ke, bafo, sifikile esiphelweni senqaku. Lixesha lokuba usonge ngoku. Ndiyathemba ngokunyanisekileyo ukuba inqaku linikezwe ixabiso obelilifuna kakhulu kwaye belifanele ixesha lakho kunye nengqwalaselo. Ngoku ukuba unolwazi olungcono kakhulu qiniseka ukuba ulusebenzisa ngendlela efanelekileyo onokuyifumana. Ukuba unombuzo othile engqondweni yam, okanye ukuba ucinga ukuba ndiphose inqaku elithile, okanye ukuba ungathanda ukuba ndithethe ngenye into ngokupheleleyo, ndicela undazise. Ndingavuya kakhulu ukuba ndinyanzele izicelo zakho kunye nokuphendula imibuzo yakho.
i-wifi engabonisi iifestile ezili-10
Sebenzisa i-flash drive njengenkunzi yegusha
Unxibelelwano lwendawo leyo alunasimo esisebenzayo se-ip windows 10 inethiwekhi engaziwayo
vala isikrini ezinye iisetingi zilawulwa ngumbutho wakho
Kutheni le nto ubuntununtunu bempuku buhlala butshintsha